Dowladda oo ka hadashay sababta keentay Internet la’aanta ka jirta qeybo ka mid ah Soomaaliya – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda oo ka hadashay sababta keentay Internet la’aanta ka jirta qeybo ka mid ah Soomaaliya
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday sababta rasmiga ah ee keentay Internet la’aanta tan iyo habeenkii xalay ka jirta qeybo ka mid ah gobolada koonfureed iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
Aggaasimaha wasaarada boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Xaaji Cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay adeegga Internetka ah oo ay bixiyaan shirkadaha kala duwan ee Hormuud, Global iyo Somtel ay cilad soo wajahday, kadib markii uu markab dul-maray barta ay ku kulmaan labo fiilo Internet ah oo uga kala yimaada dalalka Jabuuti iyo Kenya.
“Meel ay iska galaan labo fiilo oo Internet-ka usoo gudbiya Soomaaliya ayaa waxaa dul-maray markab aad u weyn, waxayna taasi keentay in cilad ay ku timaado, waxaa haatan meeshaasi loo diray markab kale oo fiilooyinkaasi soo haggaajiya, lamana ogo inta maalmood ay qaadan doonto” Sidaas waxaa yiri agaasimaha wasaarada boostada iyo isgaarsiinta Axmed Xaaji Cabdi.
Illaa iyo haatan lama oga in arrintaani ay ka dambeyso arrimo siyaasad iyo inkale, balse waxa uu aggaasimaha sheegay in Internet la’aantaasi jirto ay saameyn baahsan ku keentay howlaha ka socday xafiisyada dowladda Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horeeysay oo xilli Ciid ah ay Internet la’aan baahsan ka dhacdo magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka tan iyo markii si rasmi ah dalka looga hirgaliyay adeegga internetka, iyadoona dad badan oo qoysaskooda, eheladooda iyo asxaabtooduba doonayay in munaasabadda Ciidul Fitriga awgeed ay kula xiriiran baraha bulshada, balse ay suurto-gali weysay.